Ho An’ireo Siriana Mpitsoaponenana Monina ao Jordàna, Mitondra Fanantenana sy Ainga Vao Ho Fanarenana ny Fireneny Ny Asa Fanaovana Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2017 10:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, русский, Português, Español, Italiano, English
Jbeily mankafy ny takarivany no sady miresaka ny diany avy any Siria nankao Jordàna. Sary nopihan'ny mpanoratra.
Mamiratra vokatry ny taratry ny jiro fotsy naraikitra ery amin'ny rindrina efa vasobasoky ny trano ny tavany. Ataon'ny hafanan'ny fiandohan'ny volana Jolay tazana miavaka tsara ire vongan-katsembohana eny amin'ny handriny. Na eo aza ny sakana ataon'ireo bibikely tsy sasatry ny manidintsidina manodidina ny toerana misy azy manokana, toa tony izy, maotina, saingy mihoatra lavitra noho ny zavatra hafa, matoky tena tsara. Taona dimy no nilainy handrafetana fanoherana ny fibodoana sy ny fanaovana fahirano, noho izany tsy hanohintohina azy toy ny taloha raha izay bibikely.
Vehhivavy Siriana mpitsoaponenana avy any Aleppo i Zein Jbeily,izay nandositra ny tranony tao Siria tamin'ny 2012. Nandritry ny taona dimy farany nodiaviny, mpikatroka amin'ny asa fanaovan-gazetin'olontsotra i Jbeily, nisafidy ny hitolona ho an'ny zon'ny vahoakany amin'ny alàlan'ny hetsika ilàna herisetra sy ny fanolorantena ho an'ny fanoratana.
“Efa voaporofo ara-tantara ihany koa fa tsy ny fitaovampiadiana no vahaolana mahomby indrindra. Ny tsy fanaovana herisetra no fitaovampiadiana goavana indrindra handonana ny maha-olona, matanjaka kokoa io noho izay fitaovampiadiana fandripahana mahery indrindra,” hoy izy mantsy ny Global Voices. Any Siria, Jebily manohana ny hoe : “tsy mba atifitra fahavalo ireo bàla fa na ny mpiray vodirindrina aminao na ny rahalahinao aza angamba.”
Noraisin'i Jbeily ho zavatra mampiontana ny fony ny hetsika tsy ilàna herisetra ary natombony ny adiny manokana, amin'ny fampiasàna ny fanoratana sy ny fanaovana tatitra fanadihadiana lalina, mifanohitra amin'ny fampiasàna bala afomanga sy bàla, mba hanatsaràna ny fiveloman'ireo Siriana mipetraka ao Jordàna.
Kanefa, tsy mpanoratra hatrizay i Jbeily. “Tany Siria, tsy nanana asa aho,” hoy izy teo am-piresahana momba ny fiainany tamin'ny naha-reny mpikarakara tokantrano azy. nandritra ny revolisiona, ny fitsipahany fatratra ny fitondràna Assad – fitsipahana izay ifampizaràn'ireo Siriana ao Jordàna – dia nahatonga ny asa fanaovana gazety sy ny fandraketana ireo zavadoza vitan'ny tafi-panjakàna ho toy ny valinkafatra azo ambara ho natoraly.
“Tany Siria, noraketiko ho lahatsary ireo fihetsiketsehana ary nalefako ho an'ireo fantsom-pahitalavitra izy ireny,” hoy ny filazan'i Jbeily. Ampian'i Jbeily ihany koa fa nandritra ny revolisiona izy dia nanome fanafody ho an'ireo tany amin'ny faritra tratry ny fahirano tao Aleppo.
Tsaroany ny diany avy ao Aleppo nankany Damaskaosy ary ny farany namakivaky ny sisintany atsimon'i Siria iraisany amin'i Jordàna, “Betsaka ny rarintsaina nanjo ahy teo am-pahatongavana. Tena tohina aho,” hoy izy. Nanomboka 2012 ka hatramin'ny 2016, imbetsaka niovaova asa i Jbeily, ny tsirairay tamin'izany dia nisy foana nidiran'ny fanoratana momba ireo mpitsoaponenana na ny revolisiona Siriana, izay hatreto, mahavoarohirohy an'i Rosia, Iràna, Etazonia ary firenena marobe ao Golfa.
Tamin'ny 2016, nahita toerana tao amin'ny Radio al Balad - Fampielezampeom-pirenena – tao Amman i Jbeily, indrindra fa tao anatin'ilay fandaharana malaza tao amin-dry zareo Syrians Between Us (Ireo Siriana eto anivontsika). Tamin'ny 2012, ilay fampielezampeo manana ny foibeny ao Amman, niaraka niasa tamin'ny departemantam-panjakàna momba ny Raharaham-Bahoaka tao amin'ny masoivoho amerikàna tao Jordàna, no nanomboka Syrians Between Us, tetikasa mpisava làlana amin'ny karazany, izay nanofana ireo Siriana mpitsoaponenana ho toy ny olontsotra mpanao gazety hifantoka amin'ireo mpitsoaponenana ao Jordàna.
Ny ampahany tsara indrindra ao anatin'ilay fandaharana, hoy ny hevitry ny maro, dia ny hoe ny andraisan'izy ireo eo amin'ny 100 dolara eo ny tantara tsirairay avy—vola kely ho an'ny maro, saingy betsaka kosa eo imason'ireo tsy manana firenena sy trano fonenana tao anatin'ny volana vitsivitsy monja. Tsy i Jbeily no voalohany nandray anjara, saingy izy no iray isan'ny farany. Tamin'ny 2016, tsy nahazo famatsiambola intsony ilay fandaharana ary natsahatra mangingina tao.
Araka ny lazain'i Etaf Roudan, mpanao gazety ao amin'ny Community Media Network, eo amin'ny 60 eo ireo olontsotra Siriana voaofan'ny Syrians Between Us ho lasa olontsotra mpanao gazety fony mbola velona teo ilay fandaharana.
Hatrany am-piandohany, nitondra tsikera mazava momba ireo olana manjo ny mpitsoaponenana ao Jordàna ny Syrians Between Us : kolikoly lalina any anatin'ireo toby fandraisana mpitsoaponenana, ny fiaretan'ireo mpitsoaponenana ny tsy fahampian'ny fahafahana miditra hahazo fanabeazana, ary ny fanararaotana mazàna tsy mitsahatra zakain'ireo fianakaviana Sirana.
“Samy manampahaizana manokana amin'ny fiainany ny olona rehetra. Tonga tao an'eritreritray ny hoe nahoana moa raha avela hiresaka momba ny fiainany manokana ireo Siriana,” hoy i Daoud Kuttab, mpandray anjara ao amin'ny Al-Monitor no sady iray amin'ireo mpanorina ny fandaharana, raha nitafa tamin'ny Global Voices. “Voamarikay ny fitomboan'ny kabary feno fankahalàna atao an'ireo Siriana mpitsoaponenana, indrindra fa any amin'ny sasany amin'ireo fampielezampeo. Ho anay, izy io dia Siriana ataon'ny Siriana momba ireo Siriana,” hoy izy nanohy ny teniny.
Ali mitsiky manoloana ny fakantsary tao Zaharan, any amin'ny manodidina an'i Amman. Sary nopihan'ny mpanorara.
Sa’id al-Haj Ali koa dia efa niasa niaraka tamin'ny Syrians Between Us, saingy tsy toy ilay mpiaramiasa aminy, fa avy Daraa any amin'ny faritra farany atsimo any Siria no fiaviany, ary tamin'ny 2014 izy no nanomboka nanoratra ho an'ny Syrians Between Us.
Toy ireo Siriana marobe, nifindra nankany Irbid i Ali — tanàna kely iray any amin'ny 140 km eo ho eo ao avaratr'i Amman. Araka ny tatitry ny UNHCR, manodidina ny 150.000 ireo Siriana mpitsoaponenana vaosoratra anarana monina ao an-tanànan'i Irbid, mahatonga azy io ho ny iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra mpampiantrano ao Jordàna.
Ali, anefa, tsy mpanao gazety. Mpianatra ny literatiora Arabo tao amin'ny Anjerimanontolon'i Damaskaosy izy, saingy nanetsika ilay lafy iray mpandàla revolisiona tao anatin'i Ali ny fahitàna ny ho fahombiazan'ny revolisiona. “Nahazatra ahy ny naka sary sy nizara ireo fanoherana [an'i Assad],” hoy izy tamin'ny Global Voices. Farany, niainan'i Ali ny fidirana sy fivoahana ny fonja, ary tohin'izany, ny fandosirana.
“Tonga teo Jordàna aho satria natahotra fisamborana sy nikaroka fahalemana. Ary noho ireo fandrahonana tsy mitsahatra ataon'ny fitondràna Assad amiko sy ny fianakaviako, tsy nanana safidy afa-sy Jordàna aho.”
Feo iray sy azo notsinontsinoavina ho an'ireo izay efa tsy nanana izany intsony no fahitàn'i Ali ny asa nataony ho an'ny Syrians Between Us. “Tsy nisy fampahalalambaovao tao Jordàna mba hiresahana momba ireo olana sy tantaran'ny Siriana—olana amin'ny fiainana andavanandron'izy ireo momba ny sakafo, ny fanampiana, ny fikarakaràna ary ny fanabeazana,” hoy izy.
Efa tapitra ankehitriny ny Syrians Between Us, fa tsy izany kosa ny fiainan'ireo Siriana 60 eo ho eo miasa ho toy ny mpanao gazety. Ankehitriny, i Ali sy Jbeily dia miasa tontolo andro ho toy ny mpanao gazety, ary toa tsy mbola ato ho ato izany no hiova.
Tsy isalasalàna fa samy manonofy ny hiverina any Siria i Ali sy Jbeily—raha ny marina dia maniry ny hametraka fandaharana iray amin'ny fampielezampeo any amin'ny fireneny i Ali, saingy toa mbola sarotra eritreretina ny fiverenana. Tamin'ny taona lasa, ny fitondràn'i Assad miaraka amin'ireo Iraniàna sy Rosiana mpiaradia aminy, dia niverina nandray ny fifehezana faritra midadasika ao amin'ny firenena, nahatonga ny maro hino fa mbola hijanona haharitra eo i Assad.
Araka ny lazain'i Kuttab, “tanjona iray tsy mivantana kendrenay ny hoe vantany vao lasa firenena malalaka sy demaokratika i Siria dia ilainy [Siria] ny fisianà fanofànana vondrona mpanao gazety matianina ary afaka izy ireo ho tonga hiasa ho an'ny fireneny.”
Raha androany izay toa tsy mbola hahatratrarana an'izany, i Ali sy Jbeily kosa manohy manoratra, sy manonofy ihany koa—manonofy ny mbola hisian'i Siria iray izay efa nisy fahiny ary indray andro any mbola afaka hisy, noho ny asa be ataon'izy ireo.
Tontosa ity fandrakofana ity noho ny fiarahana miasa amin'ny Pulitzer Center for Crisis Reporting, izay mpianatra mandray vatsimpianarana avy ao i Aman.